Inzwa ye-LiDAR izosebenza kuphela kwi-iPhone 13 Pro | Izindaba ze-IPhone
Inzwa ye-LiDAR izosebenza kuphela kwi-iPhone 13 Pro
Amahemuhemu ngamakhamera nenzwa ye-LiDaR yamamodeli amasha we-iPhone 13 abesetafuleni isikhathi eside futhi manje, njengoba uchwepheshe wokuvuza kwezobuchwepheshe echaza ku-tweet I-DylanDKT, amamodeli we-iPhone 13 Pro kuzoba kuphela ngale nzwa.
Kubukeka sengathi amamodeli amancane we-iPhone 13 noma i-iPhone 13 azosala ngaphandle kwale sensor, njengoba kunjalo ngamamodeli wamanje. Kubukeka sengathi u-Abel ubangeze kuphela njengoba naye ekwenzile kwi-iPad Pro kulo nyaka.
Inzwa ekhethekile yobubanzi be-Pro bama-iPhones
Inzwa ye-LiDAR yafika okokuqala kumadivayisi we-Apple ngokuqaliswa kwayo ku-iPad Pro yangonyaka odlule futhi yangezwa kamuva kumamodeli we-iPhone 12 Pro ne-iPhone 12 Pro Max. Kubukeka sengathi lokhu kuzoqhubeka nokuba njalo futhi I-Apple ayihlelile ukufaka lezi zinzwa kwamanye amamodeli we-iPhone azofika kulo nyaka.
Ku-tweet entsha efakwe nguDylanDKT izolo ntambama uchaza ukuthi le LiDAR izofinyelela kuphela kumamodeli we-Pro wale modeli elandelayo ye-iPhone:
ILiDAR izofika kuphela kumamodeli we-pro iPhone. Ngasekuqaleni konyaka kubonakale sengathi i-Apple ifuna ukukhipha zonke izinhlobo ze-iPhone 13 / 12S nge-LiDAR kodwa ngenxa yezizathu ezithile, ngeke kwenzeke kulo nyaka.
- Dylan (@dylandkt) Julayi 11 2021
ILiDAR emele: "Ukutholwa Kokukhanya Nokulinganisa noma Ukuthola Ukufanekisa Kwe-Laser Nokulinganisa" Ichazwa ngendlela elula i-laser eshaywayo evumela ukukala ibanga noma indawo yezindawo, izikhala noma izinto ezivumela ukuthi zimelele cishe futhi lokho kuhle impela kepha kuyiqiniso ukuthi abasebenzisi abaningi be-iPhone 12 Pro noma i-Pro Max ungagcini ngokuyisebenzisa. Amahemuhemu mayelana nezinhlobo ezintsha ze-iPhone akhombisa ukuthi lezi zizophinde zengeze i-LiDAR kububanzi bayo boqobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » Inzwa ye-LiDAR izosebenza kuphela kwi-iPhone 13 Pro
I-WhatsApp ikuvumela ukuthi uthumele izithombe ezizobonakala kanye kuphela
I-iPad mini entsha eyenziwe kabusha ngemuva kwehlobo